Smartcards na-agagharị n'ime afọ ole na ole na-esote | Martech Zone
Chaị… mgbe ị na-eche ihe niile raara onwe ya nye na dabere ngwaike maka ọdịnala magnetik nkeewa akara kaadị, nke ahụ bụ a ton nke akụrụngwa na-efu si n'ebe dochie. Otú ọ dị, n'ime afọ ole na ole sochirinụ, nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ga-eme! Kaadị akwụmụgwọ ọdịnala na-apụ.
O were hacking nke 70 nde Target kaadị akwụmụgwọ n'oge oge ezumike 2013 iji mee ka ndị Congress kwụsị ịhapụ kaadị magnetik nke ọtụtụ ndị America na-eji ma tinye oge maka oge ọhụrụ (na US, agbanyeghị) teknụzụ kaadị mara mma. Ọ bụ ezie na ndị America na-amalite ịmụ ihe smart kaadị bụ, ejirila ya (nke ọma) na ahịa ndị ọzọ maka ihe karịrị afọ 20, na-eme US naanị ahịa kachasị na mbara ala ka na-eji swipe na teknụzụ akara.
The New Technology a maara dị ka EMV (nke pụtara: Europay, MasterCard na Visa) - makwaara dị ka kaadị smart. Kaadị Smart na-eji mgbawa na PIN ma ọ bụ mgbawa na teknụzụ na mbinye aka yana ọtụtụ nchekwa nke nchekwa, gụnyere mgbawa agbakwunyere na ihe nchọpụta pụrụ iche, nke nwere ike ịgbanwe n'oge ọ bụla.
Inye sistemụ iji kpokọta ozi na mgbawa na imepụta kaadị akwụmụgwọ adịgboroja dị mgbagwoju anya ebe kaadị magnet, enwere ike ịgụ data, dee, ehichapụ ma ọ bụ gbanwee ya na ngwa na-adịghị adị, na-eduga na aghụghọ kaadị akwụmụgwọ dị elu. N'ahịa ebe etinyere kaadị smart, ọghọm adaala na ọkara ma jiri adịgboroja belata 78%. Ọnụ ego mgbanwe ahụ bụ ihe ruru ijeri $ 35, nke ndị na-ere ahịa ga-ebufe.
Tags: kaadịkaadị akwụmụgwọEmveuropayMasterCardkaadi amakakaadịvisa